♪ Angel Shaper: Angel Shaper နဲ့ သင်္ကြန်
ဟေ့...ရေကြောက်တဲ့ ကောင်မလေး...အခုရော ရေမှန်မှန် ချိုးရဲ့လား :)))
စွာလန်ကျဲနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရေပက်ခံရလို့ အော်ငိုနေတဲ့ ပုံစံလေးမြင်ဘူးချင်လိုက်တာ....
ဗုံးပေါက်တဲ့ အကြောင်းကတော့ တွေးမိတိုင်း ဒေါသဖြစ်ရတယ် ညီမလေးရေ... လူတွေမှ ဟုတ်ကြရဲ့လားမသိဘူး...ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့ သုံးပြီးပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး...မြန်မာ့နှစ်ဦးမှာ သွေးစွန်းရတဲ့ အဖြစ်ခံပြင်းလွန်းလို့ .....အဲ...ပွားရင်းပွားရင်း များသွားပီ...ရပ်မှ...
ငါ့ညီမလေး အတွက် ကျက်သရေ မင်္ဂလာ အဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကွယ် ...
သင်္ကြန်ကို ဘာမှမလုပ်လိုက်ရ၊ မလည်လိုက်ရတာချင်းအတူတူ.... ငါ့ညီမလေးတွေကိုတော့ သနားပါတယ်လေ....။
ကိုဏီတို့က လူကြီးတွေဆိုတော့ ကလေးတွေကို သနားရတာပေါ့....အဟမ်းးးး
ဒါပေမယ့်လေ... အစ်ကိုတို့တွေထက် သနားစရာကောင်းတာက သင်္ကြန်မှာ သင်္ကြန်လိုပျော်ရင်း... အမှတ်တမဲ့နဲ့ လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားလိုက်ရသူလေးတွေပဲလေဗျာ....း((
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ....။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမရေ
ရေကြောက်သူဆိုလို့ ကြိုသိထားရတော့ ရေမပက်ပါဘူးကွယ်. .တိုင်ကီထဲကိုပဲ ခြေထောက်က ကိုင်ပြီး ဇောက်ထိုးနှစ်ပစ်မယ်။
အခုတော့ ရေမှန်မှန် မချိုးဘူး မဟုတ်လား . . .
ဒါကြောင့် ဝက်က ပြောတာ သူ့လို့ ရွှံလူးနေတဲ့ သူထက်တောင်မှ ညစ်ပတ်တယ်တဲ့.. . သူပြောတာ
(ဤကား ရန်တိုက်ပေးခြင်း )
အကိုလည်း သင်္ကြန် ဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိလိုက်ပါဘူးလေ..
အဆိုတော် ဖြစ်ရင် မမေ့နဲ့နော်. . .
ခွေလက်ဆောက်ပေး . .( ခိုးကူးပစ်မယ် )
သင်္ကြန် ဘယ်မှမလည်ရတာစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။ ဗုံးပေါက်တဲ့အသံကြားရကတည်းက စိတ်ပျက်မိတာ။ ခုတော့ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်.
အကျည်းတန်သင်္ကြန်လေးဖြစ်သွားလို့တော့ စိတ်မကောင်း ဘူးပေါ့။
18 April 2010 at 01:19
တွေ့ရင် ရေပုံး နဲ့ လောင်းဖို့ အကြံရသွားပြီ
Pai Pai said...
thingyan di year tauk yay pat khan ma out phit par bu ( shi mha ma shi tar dubai mhar mandat )
yayakhu hti ma ku tat tar tauk sate ma kg bu... (kyone yin tauk yay kan htae kan cha own mel)
yay kyout yin tauk daw dirty phit mel..
bar pel pyaw pyaw kyone yin tauk kan cha own mel.. swimming pool htae..
^_^ ..peace.. ^_^
nhit thit mhar pyaw shwin par say
ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိရင် ရေကျောက်တယ်တဲ့ .. ကြားဘူးတာ ပြောတာပါ ...
ကြုံမှ နင့်အတွက် သော့တစ်ချောင်း ပို့ပေးအုံးမယ်နော် ... :P
ကိုယ့်အစ်မနဲ့ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ မသိလိုက်မသိဘာသာ ဖြတ်သန်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ကြန်နေ့ရက်တွေကတော့ အတူတူမို့ အထူးပြောနေစရာမလိုတော့ပြီ။
ကိုယ့်အစ်မ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့လို့ အထီးကျန်မှုကင်းပါစေ။
ရေချိုးခန်းထဲ ရေချိုးရမှာတောင် ဝန်လေးရလောက်တဲ့အထိ ရေကို ကြောက်တတ်သွားရတာပါ။....
ဒါဆို ရေချိုးရင် ဘယ်အခန်းထဲ သွားချိုးတာ တုံးးးးးး
အိန်ကျယ် တယောက် ဒီနှစ်သင်္ကြန် ရန်ကုန်မှာ ရှိမနေတာပဲ ကံဖယ်တယ် မှတ်ရမယ်နော် .. ..
အစ်မလဲသင်္ကြန်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာအမှတ်တရမှ သိပ်မရှိဘူး... ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်ဆို Bible campတွေဘဲဝင်နေရတာ... ဗုံးသတင်းအတွက်တော့ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး
19 April 2010 at 05:50
အင်းခင်လို့ ပြောရဦးမယ်။ရေကြောက်တာတော့ကြောက်တာတော့ကြောက်တာပေါ့။ရေမချိုးပဲတော့မနေပါနဲ့ ။မကောင်းပါဘူး။
ဒင်း ငါမရှိတုံး သောင်းကျန်းလိုက်ထှာာာ နာမယ်
ဟီးးး ချစ်မ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်
အာဘွား ရှလူး မွ မွ
ခုမှရေကြောက်တတ်မှန်းသိတယ်ဗျာ...စောစောကသိရင် မီးသတ်ပိုက်နဲ့ကိုလာခဲ့ပါတယ်...ခုမှသိတော့ နေပေ့စေတော့...ဟီး
အင်း ကျွန်တော်ကလည်း ရေကြောက်တဲ့သူမှ လိုက်ရှာပြီးလောင်းချင်တာ ..နာတယ်ကွာ စောစောကမသိတာ....
သင်္ကြန် မလည်ရတာချင်းတော့ အတူတူပဲ။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်ကာလကတော့ အစ်မအတွက်တော့ တော်တော် အလုပ်များပြီး လုံးဝမအားမလပ်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ပဲ။ အဲဒီအကြောင်း နေက်ပိုင်း ပို့စ်တခုတောင် တင်ဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ ဗုံးခွဲတဲ့အကြောင်းတော့ ဘလော့ဂ်မှာ ပြောလို့ဝသွားပြီမို့ ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးနော့်။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ
ငါလည်း နင့်ကို သတိရလို့ ဘယ်မှ မလည်ဖြစ်ပါဘူးဟာ။ နင့်ကို သတိရလို့ ကံကောင်းသွားတယ်။ အဟီးးးး
8 May 2010 at 03:34
ငကြောက်ကြီး ပါလားးးးး ရေကြောက်တာကိုပြောပါတယ်။
ဒီလိုမှန်းသိလို့ ချောင်းနေတာ... နောက်တစ်ခါ ရေကန်ထဲ နစ်ကြည့်မယ်.. အဲလောက်ချစ်တယ်..ဟီးး
စာနာတတ်တဲ့ ဗုံးတွေသာ ဖေါက်ခွဲပြီး၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ဆိုတဲ့ ရေပိုက်တွေနဲ့ ပက်ဖြန်းနိုင်ကြပါစေလို့သာ...ဟုတ်တယ်ဗျ..အဲဒီလိုမျိုးလေးပဲ အားလုံးကဖြစ်စေချင်ကြတာပါ..။